डा. छक्क भन्छन्– हुम्लामै बसेर सेवा गरिरहन पाउँ - Narayanionline.com Narayanionline.com डा. छक्क भन्छन्– हुम्लामै बसेर सेवा गरिरहन पाउँ - Narayanionline.com
सुर्खेत, जेठ ३१-
भनिन्छ ‘जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय ।’ कुनै पनि काम गर्न मनैदेखि इच्छा भए जस्तो सुकै अप्ठ्यारा समस्या पनि पूरा गर्न सकिन्छ । हुम्लाको दुर्गम ठाउँ सर्केगाड गाउँपालिका–४ दुलीका छक्क थापाले यो भनाइलाई प्रमाणित गरिदिएका छन् । जस्तो नाम उस्तै काम । उनले सबैलाई छक्क पर्ने काम गरेका छन् ।
२५ वर्षीय छक्क कक्षा एकदेखि एसएलसीसम्म गाउँकै विद्यालयमा पढे । जहाँ रहे पनि उनले मिहिनेतलाई भने आफ्नो दिनचर्या बनाए । अभावैअभाव र विकटताको भुँमरीकाबीच ०६८ सालमा उनले एसएलसी दिए । उनी सम्झन्छन्, ‘रातभर दियालो, झोरो, टुकी बालेर रात कटाउथ्यौं । तर मिहिनेत गर्न छाडिन ।’ पढाइमा निकै चासो र मिहिनत गर्ने उनी १ देखि १० कक्षासम्म सधै फस्ट सेकेण्ड भए । उनले एसएलसी पनि प्रथम श्रेणीमै पास गरे । उनको मिहिनेत र लगनशीलबाट उनी अहिले डाक्टार बनेका छन् । बिपी प्रतिष्ठान मेमोरियल कलेज धरानबाट उनले एमबीबीएस पास गरेका हुन् ।
छक्कको लक्ष्य भनेको अब दुर्गम हुम्लाबासीका पीडामा मलम लगाउनु मात्रै हो । हरेक पाटोबाट विकट हुम्लाका बासिन्दका घाउमा मलम लगाउँदै दुर्गमलाई सुगम बनाउने उनको लक्ष्य छ । उनले भने, ‘मेरो एउटै लक्ष्य र उदेश्य भनेको हुम्लामै बसेर यहाँका मानिसको घाउमा मलम लगाउने हो ।’ न्युज कारखाना